Fonosana peratra - China Wenzhou Dongyi milina
ny orinasa Mitambatra isan-karazany ny metaly sy ny tsy-metaly fitaovana sy teti-dratsy isan-karazany mba hihaona amin'ny fepetra takiana maro mampiavaka fonosana ary koa ny voafaritra kokoa sy olana ireo. Ny fitaovana isan-karazany fa ny orinasa mampiasa dia misy isan-karazany manerana ny malalaka ny fonosana vava vola aminy, natao ho an'ny unidirectional sy bidirectional famehezana, ambany tsindry hiainana sy mandatsa-dranomaso fanadiovana famehezana. Izany koa ny haingam-pandeha sy ny fanerena avo vava vola, ary koa ny sandwich sy ny teti-dratsy telo boribory. Ba ...
ny orinasa Mitambatra isan-karazany ny metaly sy ny tsy-metaly fitaovana sy teti-dratsy isan-karazany mba hihaona amin'ny fepetra takiana maro mampiavaka fonosana ary koa ny voafaritra kokoa sy olana ireo.
Ny fitaovana isan-karazany fa ny orinasa mampiasa dia misy isan-karazany manerana ny malalaka ny fonosana vava vola aminy, natao ho an'ny unidirectional sy bidirectional famehezana, ambany tsindry hiainana sy mandatsa-dranomaso fanadiovana famehezana. Izany koa ny haingam-pandeha sy ny fanerena avo vava vola, ary koa ny sandwich sy ny teti-dratsy telo boribory.
Basic fonosana Ring Designs:
Single hanao zavatra tombo-kase vava vola aminy, / tsiroaroa
Double tombo-kase hanao zavatra vava vola aminy, / tsiroaroa
Backup vava vola aminy,
ny fanerena onja
Pressure mpandika amin'ny fanampiana slots
Fonosana Ring Fitaovana:
CPI manokana Polymer Alloys
Manaraka: menaka scraper peratra
3mm famatrarana Springs
China Flat Coil Big Spring mitarika Force
Coil famatrarana Spring
Coil Springs Fa ambony seza
Famatrarana Coil Spring
Down nitodika Gas Spring
Flat Coil Big Spring mitarika Force
Nandrisika Steel Spring Fa tehamaina Band
Gas Spring Fa Office seza
Gym Fitaovana Spring
Lockable Gas Spring / Fanidiana Gas Lift
Nanakodia nandrisika Steel Spring Fa tehamaina Band
Miolakolaka Power Spring
Steel Spring Fa tehamaina Band
Olana Coil Springs
Toy famatrarana Spring